Fantaro i Endalk Chala sy Omar Mohammed, Ireo Toniandahatsoratra Vaovaon’ny Global Voices Afrika Atsimon’i Sahara · Global Voices teny Malagasy
Fantaro i Endalk Chala sy Omar Mohammed, Ireo Toniandahatsoratra Vaovaon'ny Global Voices Afrika Atsimon'i Sahara
Voadika ny 22 Avrily 2017 4:37 GMT
Vakio amin'ny teny አማርኛ, English
Endalk Chala (Ankavia) sy Omar Mohammed (Ankavanana), Toniandahatsoratra vaovaon'ny GV Afrika Atsimon'i Sahara.
Manana vaovao lehibe izahay Mpikambana roa ato amin'ny vondrom-piarahamonina dia i Endalk Chala sy Omar Mohammed izay niezaka mba handray ny toeran'i Ndesanjo Macha ho toniandahatsoratra vaovao aty Afrika Atsimon'i Sahara !
Monina any Oregon, Etazonia i Endalk. Efa anatin'ny vondrom-piarahamonina hatramin'ny taona 2011 izy. Maro aminareo no mety efa mahafantatra azy mifandraika amin'ny fikatrohana tao amin'ny Zone9, ary mety efa nifanena taminy tao amin'ny fihaonana an-tampony tany Nairobi mihitsy aza ny sasany taminareo. Mpianatra manomana ny fakàna doktorà ao amin'ny oniversiten'i Oregon i Endalk amin'izao fotoana izao. Mpiara-manorina ny famahanana bilaogy iraisana Zone9 ao Ethiopia izy. Mandany ny fotoanany miaraka amin'ny zanany vavy 18 volana rehefa tsy miraikitra eo anoloan'ny solosainany. Mikarakara ny boky famelabelarana hahazoany ny diplaoma doktorà momba ny fampitam-baovao ampielezan'i Ethiopia izy amin'izao fotoana izao. Namoaka tatitra mahaliana maro ho an'ny GV nandritra ny taona maro i Endalk, manasa anao izahay hamaky ny tantarany miresaka ny fanampenam-bava ny hira ao Ethiopia, raha mbola tsy namaky izany ianao!
Monina ao Dar es Salaam, Tanzania i Omar. Efa tato amin'ny GV hatramin'ny taona 2013 izy. Mpitati-baovao ho an'i Bloomberg izy amin'izao fotoana izao ary mitantana ny Kaody ho an'i Tanzania. Efa niasa tao amin'ny Quartz Africa, sy BBC Swahili izy, izay namokarany fandaharam-baovao isan-kerinandro tamin'ny onjampeo, ‘Haba na Haba’ (Tsikelikely). Sakaizan'i Fulbright ao amin'ny Sekolin'ny Fanangonam-baovao Walter Cronkite ao amin'ny Oniversitem-panjakan'i Arizona izy. Rehefa tsy manao ny asa fanaovan-gazety izy dia tiany ny mijery baolina kitra sy ny basket, mamaky tantara foronina, mihaino hira, ary mirotsaka ao anatin'ny tontolon'ny fahitalavitra. Maniry ny hamoaka lahatsoratra lava mikasika ny fanatanjahan-tena i Omar indray andro any. Tena mampihetsi-po ireo tantara Bridge-Ny Tetezana roa farany nosoratan'i Omar, azafady jereo ity iray ity ao amin'ny fitiavana nafoy ho an'i Amerika ary ny anankiray ao amin'ny ny fitiavan'i Tanzania ny baolina kitra.
Andao hiaraka aminay hiarahaba an'i Omar sy Endalk!
Efa nanao veloma an'i Ndesanjo isika tamin'ny fiandohan'ity taona ity, kanefa mino izahay fa mety kokoa ny hanaovana ny fankalazana veloma farany iray. Rehefa dinihina tokoa, dia nanolotra ny familiana izy rehefa nitondra ny sambon'ny GV ho an'ny Afrika Atsimon'i Sahara nandritra ny folo taona mahery !
Vao nanomboka ny GV dia efa niaraka taminy i Ndesanjo, toy ny mpanoratra nilatsaka an-tsitrapo aloha tamin'ny voalohany, ary toniandahatsoratra ho an'i Afrika Atsimon'i Sahara avy eo. Tena azo lazaina ho faran'ny vanim-potoana iray rehefa niala izy afaka 10 taona naha-toniandahatsoratra azy! Nanomboka tamin'ny taona 2006, nanorina vondrom-piarahamonina mavitrika, manan-talenta sy mahafinaritra avy any amin'ny faritra i Ndesanjo, ary nanampy anay tamin'ny fitaterana lohahevitra manan-danja avy amin'ny faritra midadasika, sarotra ary matetika hanaovana tatitra tsy marina. Tena lehibe ny sehatra niandraiketan'i Ndesanjo ka nataony tao anatin'ny zotom-po sy ny fikolokolona izany nandritra ny taompolo, sady nahavita nanoratra tantara mihoatra ny 4.500 ihany koa ho an'i Global Voices izy! Ndesanjo, manantena hatrany ny hahita ny sonianao ato amin'ny Global Voices izahay, amin'ny alàlan'ny fanoratana ireo tantara izay tena mahaliana ianao .